आईसिसको पर्दा संसारभरि फैलिएको छ। हाम्रो संसारमा यो आत्मा को देखिने कपडा हो र दुई विपरीत व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
Vol।6अक्टुबर, 1907। नम्बर 1
आईएसआईएस को मुख।
आईएसआईएस एक कुमारी बहिनी-पत्नी आमा भएको भनिन्छ। उहाँलाई स्वर्गकी रानी, ​​जीवनको वाहक, सबै जीवनको आमा र रूपहरू दिने र पुनर्स्थापक भनिन्थ्यो।
आइसिसलाई अरू धेरै नामहरूद्वारा चिनिन्थ्यो र मिश्र देशभरि प्रारम्भिक कालखण्डको मानवताद्वारा विश्वव्यापी रूपमा पूजा गरियो। सबै स्तर र वर्गहरू आईसिसका उपासकहरू जस्तै थिए। लाश मुनिको दास, जसको जीवनको वेब पेसामा पिरामिडको ढु stones्गामा दैनिक श्रम द्वारा थर्काइएको थियो; प्याम्पर्ड सुन्दरता, जसको जीवन नरम संगीत र सुगन्धित फूलहरूको बीचमा रमाहटको सपना थियो, इत्रमा नुहाईन्थ्यो र नाजुक उत्तेजित हावाले फ्यान गरिएको थियो, जसको हरेक अर्थ कला र कलाको दौडमा उत्प्रेरित थियो र युग युगका चीजहरूका साथ लिप्त थियो। विचार र प्रयास; खगोलशास्त्री-जादूगर जसले पिरामिडमा उनको स्थानबाट आकाशीय यात्रीहरूको चाल देख्यो, उनीहरूको गति र यात्रा को चाप को मापन, आफ्नो इतिहास भर अन्तरिक्ष मा आफ्नो उपस्थिति को समय गणना गरी, र यति तिनीहरूको उत्पत्ति, प्रकृति को थाहा थियो र अन्त्य: सबै एकजुट आईसिसका उपासकहरू थिए, तर प्रत्येक आफ्नो वर्ग र दयालु अनुसार र आफ्नो ज्ञानको प्लेनबाट।
बलपूर्वक काम गर्न उक्साइएको दासले "दयालु आमा" देख्न सक्दैन, त्यसैले उनले एउटा वस्तुको पूजा गरे जुन उनी सकेजति हेर्नुहोस् र जसलाई उनको निम्ति पवित्र भनिएको थियोः ढु stone्गाको कुँदेर बनाइएको छवि, जसमा उसले आफ्नो प्राणको तीतोपना खन्याउँदछ र टास्कमास्टरको बन्धनबाट रिहाइको लागि प्रार्थना गर्दछ। परिश्रम र कठिनाइबाट हटाइयो, तर पीडाको दास, सुन्दरता, रमाईलोको दास भन्दा आईसिसलाई राम्ररी चिन्न, फूल र मन्दिरको प्रतीकहरूको माध्यमले अदृष्य आईसिसलाई अपील गर्‍यो र आइसिसलाई आग्रह गरियो कि ती अनुग्रहलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्छ जुन सप्लीलीले रमाईलो गरे। आकाशीय पिण्डहरूको आन्दोलनमा, खगोलविद्-जादुगरले कानून र सूर्यको मार्ग देख्थे। यसमा उनले सृष्टि, संरक्षण र विनाशको कानून र इतिहास पढ्थे: मानिसजातिको सोच र आवेगमा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने थियो र मानिसहरुको कर्मले तय गरेको राजवंशको गन्तव्य पढ्थे। अस्वाभाविक कार्यको क्रममा सामञ्जस्यता महसुस गर्दै, भ्रममा रहेको कानून र उपस्थिति पछि वास्तविकता, खगोलविद्-जादूगरले देशका गभर्नरहरूलाई आइसिसको कानूनको बारेमा जानकारी गराए जसले उनीहरूको नियम र कानूनको पालन आफ्नो प्रकृति र बुद्धिको आधारमा गरे। कानूनको अपहेर्ननीय कार्य र सबै अवस्थित रूपहरू बीचको सामंजस्य देखेर खगोलविद्-जादूगरले कानूनको सम्मान गरे, यसको अनुरुप कार्य गरे र सदा अदृश्य इसिसले निर्मित फार्महरूमा एउटा वास्तविकतालाई नराम्रो बनाए।
पीडा र आनन्दका दासहरू आइसिसलाई केवल रूप र इन्द्रियहरूको माध्यमबाट चिन्थे; बुद्धिले आइसिसलाई सबै चीजहरूको निरन्तर निर्माता र सहयोगीको रूपमा चिन्थे।
प्राचीन खेमको दिनदेखि मानवता थोरै परिवर्तन भएको छ। यसको इच्छा, महत्वाकांक्षा, र आकांक्षाहरू डिग्रीमा भिन्न हुन्छन्, प्रकारको हुँदैन। ज्ञानका सिद्धान्तहरू यूरको जस्तै हुन्। विधि र फारम एक्लै परिवर्तन भएको छ। इजिप्टको जीवनमा भाग लिएका आत्माहरू आधुनिक समयमा फेरि मैदानमा प्रवेश गर्न सक्दछन्। इजिप्ट मिश्रमा मरेनन् किनभने ऊ त्यहाँ जन्मेकी थिइन। आराधना आज अवस्थित छ जस्तो गरी यो थियो।
खनजनी पृथ्वीको पेटमा क्रलिw्गले मरियमको छविलाई प्रार्थनाको सिक्रीबाट मुक्त गर्न प्रार्थना गर्दछ। खुशीको प्रेत चेज़रले निरन्तर आनन्दको लागि प्रार्थना गर्दछ। ज्ञानी व्यक्तिले कानून र व्यवस्थालाई स्पष्ट अन्याय र भ्रमको माध्यमबाट हेर्छ र एक मात्र वास्तविकता अनुरूप काम गर्दछ जुन उसले सबै उपस्थितिका माध्यमबाट बुझ्न सिक्छ। इसिस खेमको दिनमा जस्तै आजको दिन जस्तो वास्तविक छ। आजको आइसिसलाई उनका मतदाताहरू मूर्ति, आदर्श वा वास्तविकका रूपमा पूजा गर्दैछन्। धर्मको नाम र रूप परिवर्तन भएको छ तर उपासना र धर्म उस्तै छ। मानिसहरू आईसिसलाई तिनीहरूको स्वभाव, चरित्र र विकासको डिग्री अनुसार देख्न र उपासना गर्दछन्। जसरी इसिसको पूजा इजिप्टको मान्छेको बुद्धिमता अनुसार थियो, त्यसरी नै यो हाम्रो युगको मान्छेको बुद्धिमता अनुसार छ। तर हाम्रो सभ्यताको उदय हुनुभन्दा अघि नै इजिप्टको महिमा र बुद्धिमत्तासँग मिल्दोजुल्दो नै हाम्रा जनताहरू इजिप्टको पूजामा त्यति पतित हुँदै गइरहेका छन् जस्तो इजिप्टको गिरावटमा मिश्रीहरू थिए। इन्द्रियको ग्लैमरको अतिरिक्त पैसा, शक्ति, राजनीति र पुजारीको कामले पनि इजिप्टको आजको ज्ञानलाई इजिप्टको समयमा जस्तै रोकिरहेको छ।
जोइसिसलाई चिन्ने उसले पर्दा पछाडि पार भइसकेका तुल्य इसिसको क्षेत्रहरूमा जानु पर्छ। तर सबै नश्वरहरूलाई आइसिस केवल उनी हुन् भनेर चिनिन्छ, भारी कोरिएको र मोटा घुम्का।
तर आइसिस को हो र उसको घुम्टो के हो? इसिसको पर्दाको मिथकले वर्णन गर्न सक्छ। कथा यस प्रकार छ:
आईसिस, हाम्रो बेदाग आमा, प्रकृति, ठाउँ, उनको सुन्दर बुर्का बुने कि यस मार्फत सबै चीजहरू अस्तित्वमा बोलाइन्छ र दिइन्छ। इसिसले बुहारीको लागि आफ्नो अनैतिक संसारमा शुरू गर्‍यो र बुनेको बेला उनले आफ्नो पर्दाको बनावट सूर्यको प्रकाश भन्दा बढी नाजुक, देवताको बारेमा फ्याकिदिए। भारी संसारहरूमा जारी राख्दै, घुम्टो त्यसरी नै बुनिन्थ्यो जब सम्म यो तल नपुगुञ्जेल र मृत्यु र हाम्रो संसारलाई घेर्यो।
तब सबै प्राणीहरूले आफू बसेको पर्दाको अंशबाट हेरे र देखे, ईसाको सुन्दरता उनको घुम्टोको बनावटबाट। तब घुम्टो भित्र पसेको प्रेम र अमरत्व, अनन्त र अविभाज्य दम्पती पाए, जसलाई सर्वोच्च देवताहरू पूजनीय छन्।
मुर्टलहरूले यि अनन्त उपसर्गहरू फारममा राख्ने कोशिस गरे कि उनीहरूले घुम्टोमा राख्न सक्छन्। यसले पर्दा विभाजित भयो। एकतर्फ मानिस, अर्को स्त्रीमा। प्रेम र अमरत्वको ठाउँमा, घुम्टोले मृत्युलाई अज्ञानता र मृत्युको उपस्थितिमा पत्ता लगायो।
तब अज्ञानताले घुम्टोको बारेमा अन्धकार र ध्रुव बादल फ्याँकिदियो कि असहाय मरणशीलहरूले यसलाई घुम्टोमा हाल्ने प्रयासमा प्रेमको उल्लंघन गर्न सक्दैनन्। मृत्युले अन्धकारमा डर थपिदियो, जुन अज्ञानताले ल्यायो, ताकि नश्वरहरूले आफूलाई पर्दाको पट्टिमा अमरत्वको रूपरेखा बनाउनको लागि अन्तहीन धिक्कार नलागोस्। प्रेम र अमरत्व, तसर्थ, अब अज्ञानता र मृत्युद्वारा मृत्युबाट लुकेको छ। अज्ञानले दृष्टिलाई कालो बनाउँछ र मृत्युले डर थप गर्दछ, जसले प्रेम र अमरत्वको खोजीलाई रोक्दछ। र नश्वर, ऊ पूर्ण रूपले हराउनेछ भन्ने डरले अ h्गालो हाल्छ र घुम्टो नजिक टाँसियो र आफूलाई आश्वासन दिन अन्धकारमा कम चिच्यायो।
आइसिस अझै पनि आफ्नो पर्दामा पर्खिरहेछन् जबसम्म उनका बच्चाहरूको दृश्य यसलाई छेड्ने र उनको सुन्दरतालाई शुद्ध गर्न नसकिने हुन्छ। प्रेम अझै दिमागलाई शुद्ध पार्न र यसलाई कालो दागहरू र स्वार्थ र लोभको घाउबाट शुद्ध पार्न, र सबै जीवनसँगको संगति देखाउनको लागि रहेको छ। अमरत्व उसको लागि हो जसको टकटकी यो भित्र बन्द हुँदैन, तर जो स्थिरतापूर्वक आईसिसको पर्दाबाट हेर्छ, र बाहिर पनि। त्यसोभए प्रेम पाउँदा ऊ सबैसँग मिल्दोजुल्दो महसुस गर्दछ, डिफेन्डर, प्रायोजकको लागि, र इसिस र तिनका सबै बच्चाहरूको उद्धारकर्ता वा ठूला भाई हुन्छ।
आईसिस, शुद्ध र शुद्ध नगरिएको, असीम, असीम अन्तरिक्ष भर समरूप आदिम पदार्थ हो। सेक्स आईसिसको पर्दा हो जुन यसले दृश्यता प्रदान गर्दछ यद्यपि यसले प्राणीहरूको दृष्टिलाई बादल दिन्छ। आइसिस (प्रकृति, पदार्थ, ठाउँ) आफैंमा प्रभावित भएको मानिस र विख्यात संसारका मानिसहरुको सोच र कार्यहरुबाट, हाम्रो संसार कारण र प्रभावको कानून अनुसार पुनरुत्पादित थियो। त्यसकारण आमा आईसिसले आफ्नो अदृश्य संसारमा आन्दोलनहरू शुरू गर्नुभयो र बिस्तारै क्रान्तिमा सहभागी भएका सबै बिस्तारै बिस्तारै अस्तित्वमा आयो; यसैले हाम्रो विश्व अदृश्यबाट बनाइएको थियो जस्तो क्लाउडबिना आकाशबाट बादल कोरिएको छ। सुरुमा संसारका प्राणीहरू हल्का र हावायुक्त थिए; बिस्तारै तिनीहरू उनीहरूको शरीर र रूपहरूमा गाढिए जबसम्म तिनीहरू अन्तमा हामी आफैंलाई दिनभरि पाउन सक्दैनौं। ती दिनहरूमा, तथापि, देवताहरू मानिसहरूसँग पृथ्वीमा हिडे, र मानिसहरू पनि देवताहरू जस्ता थिए। उनीहरूलाई यौन अहिले हामीसँगै थाहा थिएन, किनकि उनीहरू घुम्टोमा यति गहिरो ईर्ष्या गर्दैनन्, तर उनीहरू बिस्तारै यसको बारेमा सचेत भए जब शक्तिहरू घुलमिल भए र झन अशक्त भए। जो मानिसहरु मध्येका एक लिंग पनि थिएन यो दर्शन हाम्रो भन्दा कम बादल थियो; उनीहरूले व्यवस्थाको उद्देश्य देख्न सक्थे र त्यसै अनुसार काम गरे; तर उनीहरूको ध्यानाकर्षण संसारका चीजहरूमा बढी ध्यान पुर्‍याइएको थियो र प्राकृतिक नियमको आधारमा तिनीहरूको दृष्टि आत्माको भित्री संसारमा बन्द भयो र यस पदार्थको बाहिरी संसारको लागि पूर्ण रूपमा खुला भयो। तिनीहरू यौनको रूपमा विकसित भयो र साधारण जीवहरू बने जुन हामी आजका छौं।
प्राचीन समयमा हाम्रो शरीरहरू प्राकृतिक कानून मार्फत संचालन द्वारा उत्पादन गरिएको थियो। आज हाम्रो शरीरहरू इच्छा द्वारा उत्पन्न गरिएको छ, र प्राय जसो ती उत्पादन गर्नेहरूको इच्छाको बिरूद्ध अस्तित्वमा आउँछ। हामी हाम्रो शरीरमा उत्क्रांति चापको तल्लो छेउमा र विकास चक्रको माथिल्लो चापमा उभिन्छौं। आज हामी पर्वतारोहण शुरू गर्न सक्छौं, ग्रससेस्ट र सबैभन्दा गहिरो तहदेखि आइसिसको पर्दाको सबैभन्दा हल्का र पातलो किनारासम्म, र पर्दालाई पूरै छेड्ने पनि, यसको माथि उठ्नुहोस्, र आइसिसलाई हेरौं असंख्यको रूपमा होइन हामी पर्दा द्वारा उनको व्याख्या, उनको हुन गर्भधारण।
कानून अनुसार जुन हाम्रो संसारले शासन गर्दछ संसारमा आउने सबै प्राणीहरू Isis को स्वीकृति दिएर गर्छन्। उनीले उनीहरूका लागि घुम्टो बुन्छिन् जुन उनीहरू यहाँ बस्छन्। इसिसको सेक्सको घुम्टो कपालबाट फुत्काइन्छ र बुढेसकालमा बुनेका हुन्छन्, जसलाई पुरानो मानिसहरूले डोरर्स अफ एन्सेसी भन्ने गर्थे।
आईसिसको घुम्टो संसारभरि फैलिएको छ, तर हाम्रो संसारमा यो विपरीत लिंगका दुई जीवहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछ। सेक्स भनेको अदृश्य तान हो जसमा लुगाहरू बुनेका हुन्छन् जुन निराकार प्राणीहरूले शारीरिक प्रवेश पाउन र जीवनका मामिलाहरूमा भाग लिनको लागि लगाउँछन्। यो विपरित, आत्मा र माटो को तानो र वुफ को कार्य द्वारा, कि पर्दा बिस्तारै आत्मा को देखिने कपडा हुन्छन्; तर ताना र वूफ ती उपकरणहरू र सामग्रीहरू हुन् जुन चाहिँ मनको कार्यद्वारा निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन्। सोचाइ मनको चाहनाको कार्यको परिणाम हो र विचारको माध्यमबाट (♐︎) जीवनको आत्मा-पदार्थ (♌︎) रूप (♍︎) मा निर्देशित हुन्छ।
आत्माहरूले आईसिसको पर्दा लिन्छ किनभने यो बिना तिनीहरू फारमहरूको संसारमा उनीहरूको यात्राको चक्र पूरा गर्न सक्दैनन्; तर घुम्टो लिएपछि, तिनीहरू यसको पट्या soमा यत्ति मोहित हुन्छन् कि तिनीहरूले यसको बुन्नको उद्देश्यको रूपमा देख्न सक्दैनन्, सामाजिक वा कामुक सुख बाहेक अरू केहि प्रदान गर्दछ।
आत्मा आफैंमा कुनै सेक्स छैन; तर घुम्टो लगाउँदा यो यौनसम्बन्धको जस्तो देखिन्छ। घुम्टोको एक पक्ष पुरुषको रूपमा देखा पर्दछ, अर्को पक्ष महिलाको रूपमा, र पारस्परिक अन्तरक्रिया र घुमाउरो मोडले यस मार्फत खेल्ने सबै शक्तिको उजागर गर्दछ। तब घुम्टोको भावना सिर्जना र विकसित हुन्छ।
यौन भावना मानव भावनाहरूको बखत हो जुन मानव जीवनको हरेक चरणमा फैलिएको छ, न्यून बर्बरको माध्यमबाट, एक फकीरको भावनामा, र मानव संस्कृतिमा सम्मिलित सबै काव्यवादी धारणाको माध्यमबाट। इसिसको बुर्काको भावना र नैतिकता क्रूरताले एकै प्रकारको प्रदर्शन गरे जसले आफ्नी पत्नी किन्छ वा कब्जाको अधिकारले उनीहरूको संख्या बढाउँदछ; शिष्टताका कार्यहरूद्वारा; प्रत्येक यौनको लागि परमेश्वर अर्कोको लागि सृष्टि गरिएको हो भनेर विश्वास गरेर; र ती सबै जसले शानदार धारणा अनुसार सेक्सको उद्देश्यको व्याख्या गर्छन्। सबै एक जस्तै भावनाहरू हुन् जसले एक अर्कोलाई अर्को लि sex्गको मूल्य वा आकर्षण बढाउँछन्। तर घुम्टो लगाउनेहरूले धेरै मन पराउने देखिन्छ भन्ने कुरा दुई व्यक्तिको सिद्धान्तको धारणा हो जुन विश्वासीको स्वभाव र चाहना अनुसार धेरै रूपहरूमा प्रस्तुत गरिन्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा यो हो, त्यो मानिस वा महिला केवल आधा प्राणी मात्र हो। अस्तित्वलाई पूर्ण र सिद्ध गर्नको लागि, अन्य आधा आवश्यक छ र एक विपरीत लि of्गमा फेला पार्न सकिन्छ। कि यी दुई भागहरू पूर्ण र स्पष्ट रूपमा एक अर्काको लागि बनेका छन्, र तिनीहरू समयको चक्रमा भौंतारिनुपर्दछ जबसम्म उनीहरू भेट हुँदैन र एकताबद्ध हुँदैनन् र यसरी सिद्ध प्राणीको गठन हुँदैन। यद्यपि समस्या यो हो कि यस उत्कृष्ट धारणालाई स्थापना गरिएको नैतिक कोड र प्राकृतिक कर्तव्यहरूको उपेक्षाका लागि बहानाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
जुम्ल्याहा आत्माको विश्वास आत्माको प्रगतिमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो, र जोडी-आत्माको भावनाको तर्कले आफूलाई नष्ट गर्दछ जब शान्तपूर्वक तर्कको प्रकाशमा हेर्छ जसले आफ्नो आत्माको आत्मीयता वा अन्य आधा फेला पार्दैन र जो छैन। धेरै उत्सुकतापूर्वक सेक्सको सर्पको डंकबाट पीडित।
यो शब्द लिंग को एक हजार फरक अर्थ छ धेरैलाई यो सुन्न जो। यो प्रत्येकको लागि उसको शरीर, उसको शिक्षा र दिमागको वंशानुगत अपील हुन्छ। यसको अर्थ शरीर र पशुको चाहनाको अभिव्यक्तिले हुने गर्दछ, अर्कोलाई सहानुभूति र प्रेमको परिष्कृत भावना जो पति र पत्नीको भक्ति र जीवनका जिम्मेवारीहरूमा प्रदर्शित हुन्छ।
सेक्सको धारणा धर्मको क्षेत्रमा पुर्‍याइएको छ, जहाँ भक्तले सदासर्वदा, सर्वज्ञानी र सर्वशक्तिमान ईश्वरको बारेमा सोच्दछन् - अर्थात्, सबै कुराका पिता र सृष्टिकर्ता हुन् - र मायालु करुणाकी आमा, जो भक्तले बिन्ती गरेकी छन्। उहाँ परमेश्वर, पिता वा पुत्रसँग अन्तरबिन्ती गर्न। त्यसकारण, सेक्सको विचार मानव दिमाग द्वारा कल्पना गरिएको छ, यस स्थूल पृथ्वीमा शासनको रूपमा मात्र होइन, तर सारा संसारमा फैलिएको र स्वर्गमा पनि अविनाशी ठाउँको रूपमा। तर यदि एकले यसको न्यूनतम वा उच्चतम अर्थमा सेक्सको कल्पना गर्‍यो भने, इसिसको यस पर्दाले नश्वर आँखामा कहिले घुम्टो लगाउनु पर्दछ। मानव जहिले पनी घुम्टो देखि परे पछाडि देखिन्छ जुन तिनीहरू हेर्ने व्याख्या गर्दछ।
यो अचम्म मान्नुपर्दैन कि मानव दिमाग यौनको विचारबाट अत्यन्त प्रभावित छ। पदार्थलाई यसको वर्तमान रूपहरूमा ढाल्न यसले लामो युगहरू लिएको छ, र पदार्थको रूपका विभिन्न परिवर्तनहरूसँग गर्ने मनले तिनीहरूलाई प्रभावित गरेको हुनुपर्छ।
र यसैले सेक्स, ईसिसको घुम्टो, बिस्तारै वरिपरि र यसको वरिपरि र सबै रूपहरूमा बुनेको थियो, र रूप मा सेक्सको इच्छा प्रबल र अझै पनि कायम छ। दिमाग सेक्समा पूर्ण रूपले अवतारित भएपछि यसको दृष्टि घुम्टोले रंग्यो। यो आफैंले र अरूले पर्दाको माध्यमबाट देख्यो, र सबै मनको सोच अझै छ र पर्दा द्वारा रंगीन हुनेछ जबसम्म घुम्टो लगाउनेले लगाउने र बुर्का बीच भेदभाव गर्न सिक्दैन।
यसैले सबै मानिसलाई मानिस बनाउँदछन्, isis को पर्दा द्वारा लपेटिएको छ।
घुम्रे धेरै उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ र सामान्यतया महिलासँग सम्बन्धित हुन्छन्। प्रकृति स्त्रीको रूपमा बोल्दछ, र रूप र कार्यमा एक महिला द्वारा प्रतिनिधित्व। प्रकृति आफैमा घुम्टो बुनेको छ। महिला द्वारा घुम्टोहरूलाई सौन्दर्य घुमक्काहरू, दुलही घुम्टो, शोक पर्दाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ र तिनीहरूलाई उच्च बतास र धुलोबाट जोगाउन। प्रकृति साथ साथै महिलाले घुम्टोको प्रयोगबाट आफूलाई लुकाउँदछ र आफूलाई आकर्षक बनाउँदछ।
आजसम्म आईसिसको बुर्का र बुर्काको इतिहास, साथै यसको भविष्यको भविष्यवाणी पनि मानव जीवनमा जन्मेदेखि पाकेको बुद्धिको र बुढ्यौलीको लागि सूचित गरिएको छ। जन्ममा बच्चाको बाबुआमा द्वारा हेरचाह गरिन्छ; यसको कुनै चिन्ता वा हेरचाह छैन। यसको नरम सुस्त सानो बिस्तारै बिस्तारै अधिक निश्चित रूप लिन्छ। यसको मासु बलियो हुन्छ, हड्डीहरू बलियो हुन्छ, र यसले आफ्नो इन्द्रिय र यसको अंगहरूको प्रयोग सिक्छ; यो अझै सम्म यसको सेक्सको प्रयोग र उद्देश्य, यो बुर्कामा बुर्काएको छ कि छैन। यस राज्यले जीवनको प्रारम्भिक रूपहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ; त्यस कालका प्राणीहरूले आईसिसको घुम्टोबारे सोचेका थिएनन्, यद्यपि तिनीहरू यसको गोठभित्र थिए। तिनीहरूको शरीर जीवन संग रमणीय थियो, तिनीहरूले प्रतिक्रिया दिए र तत्वहरू र शक्तिहरूसँग व्यवहार गरे जसरी स्वाभाविक र खुशीले बच्चाहरू हाँस्छन् र सूर्यको किरणमा खेल्छन्। बाल्यकालमा घुम्ने पर्दाको बारेमा सोचेको छैन, तर जसको बारेमा यो सचेत छैन। यो बच्चाको सुनौलो युग हो किनकि यो मानवता थियो। पछि बच्चा स्कूल जान्छ र विश्वमा आफ्नो कामको लागि आफैलाई तयार गर्दछ; यसको आँखा नखोलुञ्जेल यसको शरीर बढ्दै र जवानीमा विकसित हुन्छ - र यसले आईसिसको घुम्टो देख्छ र सचेत हुन्छ। त्यसोभए संसार यसको लागि परिवर्तन हुन्छ। सूर्यको किरणले आफ्नो गुम्बा रंग हरायो, छायाँ सबै चीजहरूको बारे मा लाग्छ, बादलहरू भेला हुन्छन् जहाँ पहिले कहिल्यै देखेका थिएनन्, एक अन्धकारले पृथ्वीलाई समेट्छ जस्तो देखिन्छ। युवाहरूले आफ्नो लिंग पत्ता लगाएका छन् र यो लगाउनेहरूमा अयोग्य लगाइएको छ। यो तथ्यको कारण हो कि मनको एक नयाँ प्रवाह त्यस रूपमा आएको छ र आफ्नो इन्द्रियमा अवतारित छ, जुन ज्ञानको रूखका हाँगाहरू जस्ता छन्।
अदनको बगैंचामा आदम र हव्वाको पुरानो मिथक र सर्पको अनुभव फेरि समाप्त भयो र “मानिसको पतन” को तीतोपना फेरि अनुभव भयो। तर तथाकथित पापको भावना खुशीको भाव हुन्छ; उदास का क्लाउड जसले संसारलाई समाहित गरेको जस्तो देखियो चाँडै नै विविध रंगको इन्द्रेणी टिन्ट्स र रंगहरू दिन्छ। घुम्टोको भाव देखा पर्छ; खैरो Misgivings प्रेम गीतहरु मा परिणत; पदहरू पढिएका छन्; कविता घुम्टोको रहस्यमा रचना गरिएको छ। घुम्टो स्वीकारिन्छ र लगाईन्छ vice दुर्गुणको लुगा, भावुकताको पोशाक, कर्तव्यको उद्देश्यपूर्ण पोशाकको रूपमा।
दौडको बचपन जिम्मेवारीको प्रारम्भिक पुरुषत्वमा पक्का भयो जुन दौड पछाडि अवस्थित छ। यद्यपि प्राय: आवेगमा, बिस्तारै र सोचविचार नगरीकन, तैपनि, यद्यपि पर्दाको जिम्मेवारी लिइन्छ। आजको दिनको अधिकांश मानवजाति पुरुषहरू र महिला-बच्चाहरू जस्ता छन्। तिनीहरू यस संसारमा आउँछन्, बाँच्छन्, विवाह गर्छन्, र तिनीहरूको जीवनको जीवनलाई उनीहरूको आगमनको कारण र उनीहरूको बासको उद्देश्य जान्दैनन्। जीवन आनन्दको बगैचा हो, वाइस हल, वा युवा मान्छेहरूको सेमिनरी जहाँ उनीहरू अलिकता सिक्छन् र भविष्यको लागि धेरै सोचविचार नगरी राम्रो समय बिताउँछन्, उनीहरूको झुकाव र वातावरण अनुसार सबै। तर त्यहाँ मानव परिवारका सदस्यहरू छन् जसले जीवनमा कडा वास्तविकता देख्छन्। तिनीहरू एउटा जिम्मेवारी महसुस गर्छन्, तिनीहरू एक उद्देश्य समात्छन्, र यसलाई अधिक स्पष्टसँग हेर्नको लागि प्रयास गर्छन् र यसको अनुरूप काम गर्छन्।
मानिस, आफ्नो पुरुषत्वको पहिलो फ्ल्याशबाट पार गरेपछि, परिवारको जीवनको हेरचाह र जिम्मेवारीहरू ग्रहण गरिसकेपछि, उसले आफ्नो जीवनको काममा व्यस्त रह्यो र सार्वजनिक मामिलामा भाग लियो, जब उसले आफूलाई चाहिएको बेलामा आफ्नो सेवा प्रदान गर्यो। अन्तिममा त्यहाँ केहि रहस्यमय उद्देश्य रहेको छ जुन घुमाउरो भित्र पसेको थियो। ऊ प्रायः उपस्थिति र रहस्यहरु को झलक पाउन को लागी प्रयास गर्न सक्छ जुन उसले महसुस गर्दछ। बढ्दो उमेरसँगै, बुद्धि अझ बलियो हुनेछ र दृष्टि स्पष्ट हुनेछ, आगोले अझै पर्दामा सुस्त रहन्छ र आफैलाई जलाएन भने, र ती आगोले धुवाँ नपारून् भनेर, धुवाँ उड्न र दृष्टिलाई क्लाउड गर्ने र दम घटाउने कार्य प्रदान गर्ने। दिमाग।
जसरी वासनाको आगो नियन्त्रण हुन्छ र घुम्टो यथावत रहन्छ, यसका कपडाहरू शुद्ध संसारको लागि आदर्श संसारको सोच विचार गरेर क्रियाशील हुन्छन्। दिमाग तब घुम्टो द्वारा सीमित छैन। यसको विचार तानो र बुर्काको वुफबाट स्वतन्त्र छ र यसले चीजहरू मनन गर्न सिक्छ किनकि ती घुम्तीले दिएको रूप र प्रवृत्ति भन्दा उनीहरूको रूपमा छन्। त्यसोभए बुढ्यौली बुद्धिको रूपमा पाक्नुको साटो विवेकमा जानु पर्दैन। त्यसोभए, जसै बुद्धि बलियो हुन्छ र दिव्यता अधिक स्पष्ट हुन्छ, पर्दाको फेब्रिक यतिमा लगाउन सकिन्छ कि यसलाई होशियारीका साथ राखिनेछ। जब अर्को जन्मको साथ घुम्टो फेरि लिइन्छ, दृष्टि पर्याप्त बलियो हुन सक्छ र प्रारम्भिक जीवनमा ठूलो शक्ति, पर्दा भित्र राखिएको शक्तिहरू प्रयोग गर्न जुन तिनीहरू अन्तत: नियत छन्, र मृत्युमाथि विजय पाउन सकिन्छ।
ईसिसको घुम्टो, यौन, सबै मानिसहरुलाई दुख, दु: ख र निराशा ल्याउँछ। आईसिसको पर्दाबाट जन्म, रोग र मृत्यु आउँछ। आइसिसको घुम्टोले हामीलाई अज्ञानतामा राख्छ, ईर्ष्या, घृणा, जाति र डर पैदा गर्छ। घुम्टो लगाउनुको साथ तीव्र आका desire्क्षा, कट्टरपन्थी, कपट, छल र इच्छा-आकांक्षा महत्वाकांक्षाहरू आउँछन्।
त्यसोभए, हामीलाई ज्ञानको संसारबाट टाढा राख्ने घुम्टो फ्याँक्नको लागि के सेक्सलाई अस्वीकार, त्याग, वा दमन गर्नुपर्दछ? कसैको सेक्सलाई अस्वीकार गर्न, त्याग्नु वा दमन गर्नु भनेको यसको बाहिर बढ्ने माध्यमबाट बाहिर निस्कनु हो। हामी घुम्टो लगाउँछौं भन्ने तथ्यले हामीलाई यसलाई अस्वीकार गर्नबाट रोक्नु पर्छ; यौन त्याग गर्नु भनेको आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई अस्वीकार गर्नु हो, आफ्नो सेक्सलाई दबाउनु भनेको झूट बोल्नु र सेक्सनको कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धी पाठ सिकाउनुबाट ज्ञान सिक्ने माध्यमलाई नष्ट गर्नु र आईसिसले देखाएको रूपहरू बुझ्ने हामीलाई उनको पर्दामा चित्रको रूपमा र जीवनको वस्तु पाठको रूपमा।
घुम्टो लगाउने कुरा स्वीकार्नुहोस्, तर यसलाई लगाउनुलाई जीवनको उद्देश्य नबनाउनुहोस्। घुम्टोका जिम्मेवारीहरू मान्नुहोस्, तर यसको मेसेजमा नफस्नुहोस् ताकि उद्देश्य बिर्सनुहोस् र घुम्टोको कवितासँग नशामा परिणत हुनुहोस्। पर्दाको कर्तव्यहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्, घुमाउरो कार्यको एक उपकरणको रूपमा, तर उपकरणसँग टाँसियो र कार्यको परिणाम। पर्दा टाढा फाल्न सकिदैन, यो टाढा फाँट्नु पर्छ। यसकालागि स्थिर रूपमा हेर्दा यो विलीन हुन्छ र ज्ञातको मिलनलाई ज्ञातसँग मिल्छ।
घुम्टोले मानव प्रभाव र संस्थाको दिमागबाट सुरक्षा र बाहिरबाट अलग गर्दछ जुन पर्दाको शक्तिको वर्तमान अज्ञानतामा धेरै हानिकारक हुनेछ। सेक्सको घुम्टोले दिमागलाई उसको अदृष्य शक्तिहरू र अस्तित्वहरूको सम्पर्कमा आउनबाट रोक्छ जुन उहाँ वरिपरि घुम्छ, र रातका चराजस्तै, उसको दिमागले उनीहरूको स्थानमा फ्याँकिएको ज्योतिले आकर्षित गर्दछ। सेक्सको घुम्टो पनि एक केन्द्र र प्रकृति शक्तिको लागि मैदान मैदान हो। यसका माध्यमबाट विभिन्न राज्यहरूमा पदार्थको ग्रेडको परिसंचरण हुन्छ। सेक्सको पर्दाको साथ, आत्मा प्रकृतिको क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्न सक्दछ, उनको शल्यक्रिया देख्न सक्दछ, राज्यबाट राज्यमा रूपान्तरण र रूपान्तरण प्रक्रियासँग परिचित हुन सक्छ।
आइसिसको पर्दाबाट मानव विकासको सात चरणहरू छन्। चार बितिसकेको छ, हामी पाँचौं मा छौं, र दुई अझै आउन बाँकी छ। सात चरणहरू: निर्दोषता, प्रारम्भिक, छनौट, क्रूसीफाइल, ट्रान्समिटेशन, शुद्धिकरण र पूर्णता। यी सात चरणहरूको माध्यमबाट, सबै प्राणहरू पास हुनुपर्दछ जसले पुनर्जन्मको चक्रबाट रिहाइ पाएका छैनन्। यी सात चरणहरू छन् जुन प्रकट संसारहरूसँग गर्नुपर्दछ, ती आत्माको आक्रमकतालाई चिह्नको रूपमा लिन्छन् अनुभव हासिल गर्न, पराजित गर्न, निर्देशन दिन र आफ्नो विकासवादी यात्राको समापनमा पदार्थबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न।
राशि चक्रका संकेतहरु को अर्थ संग परिचितहरु को लागी, उक्त चरणहरु वा डिग्रीहरु लाई बुझ्नको लागि सहयोगी हुनेछ, सातलाई कसरी लागू गर्ने र बुझ्ने छ र यो जान्न को लागी कुन संकेतहरु ती हुन्। जुन आइसिसको घुम्टो लागू हुन्छ। मा संख्या 7, राशि चक्र आफ्नो बाह्य संकेतहरु संग देखीएको छ तिनीहरुको अभ्यस्त क्रममा। आइसिसको घुम्टो अप्रमाणित संसारमा मिथुन (of) को चिन्हबाट सुरू हुन्छ र प्रकट हुने संसारको पहिलो चिन्ह, क्यान्सर (♋︎), सास, मार्फत आध्यात्मिक संसारबाट प्रकट भएको पहिलो माध्यमबाट यसको अनैतिक क्षेत्रबाट तलतिर फैलिएको छ। साइन-लिओको स्पिरिट-मैटर, (♌︎), जीवन। यो अस्ट्रल संसारको माध्यमबाट खतरनाक र भारी हुँदै गयो, जुन कन्या (♍︎) को चिन्हले प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसले अन्ततः साइन लाइब्रेरी (♎︎), सेक्समा आफ्नो सबैभन्दा कम बिन्दुमा पुग्छ। तब यो आफ्नो विकासवादी चापमा माथितिर घुम्दछ, यसको तल्लो तर्फको अनुरूप, वृश्चिक (♏︎), इच्छाको संकेतबाट; धनु (♐︎), विचार; मकर (♑︎), व्यक्तित्व; त्यहाँ सबै व्यक्तिगत प्रयास र व्यक्तिगत कर्तव्यको अन्त हो। पुन: अप्रमाणितमा पार गर्दा यो उही चरणमा समाप्त हुन्छ, तर प्लेनको विपरित अन्तमा जुनबाट यो साइन इन हुन्छ एक्वैरियस (♒︎), आत्मामा।
आइसिसको पर्दा उच्च र आध्यात्मिक साथै न्यून र कामुक संसारहरूमा ओर्लिएको छ। यो मिथुन (♊︎), पदार्थ, एकसमान आदिम तत्वको चिन्हबाट सुरू हुन्छ, जहाँ सुरक्षित रूपमा जोडिएको हुन्छ र तल झारेर तल झारिन्छ। आइसिस उनको अग्लो विमानमा कुनै नश्वर आँखाले देख्न सक्दैन, किनकि नश्वर आँखाले यस संसारको छेउमा कहिल्यै छेड्दैन। तर जब एक आत्मा सबै सात चरणहरु बाट गएको छ, तब यो एक्वैरियस (♒︎) को दृष्टिकोणबाट आत्माले ईसिसलाई महसुस गर्छ किनकि उनी मिथुन (♊︎), निष्कलंक, शुद्ध, निर्दोष छ।
सात चरणहरूको स्वभाव संकेतहरूद्वारा दर्साइन्छ। क्यान्सर (♋︎), सास, त्यो अवस्था वा डिग्री हो जहाँ सबै प्राणहरू भाग लिन वा शारीरिक दुनियासँग गर्नको लागि सुरू हुन्छ; यो संसार छली र अशुद्ध द्वारा अछूत छ, निर्दोषताको चरण। त्यहाँ अहंकार यसको आध्यात्मिक र ईश्वर जस्तो स्थितिमा छ, सार्वभौम कानूनको अनुरूप कार्य गर्दै यसले सास फेर्छ र आफैंबाट आत्मा-पदार्थ, जीवन, अर्को चरण वा डिग्री, लियो (♌︎) बाट बाहिर राख्छ, र यस्तै उत्तीर्ण हुँदै जान्छ घुम्टोमा, आत्मा-पदार्थ आफैलाई रूप मा बनाउँछ।
जीवन भावनाको रूपमा को रूप मा, सेक्स को शुरुवात चरण मा छ। जीवनको प्रारम्भिक चरणमा हुने जीवहरू दोहोरो लिed्गको हुन्छन्। निम्न चिह्नमा, कन्या (♍︎), फारम, तिनीहरू चयनको चरणमा प्रवेश गर्छन्, र शरीरहरू जो दोहोरो थिए अब उनीहरूको सेक्समा अलग हुन्छन्। यस चरणमा मानव शारीरिक रूप लिईन्छ, र दिमाग अवतारमा। त्यसपछि क्रूसीफिक्सको चरण वा डिग्री सुरु हुन्छ, जसमा अहंकार सबै दु: खमा पार हुन्छ जुन सबै धर्मका मुक्तिदाताहरूले सहने भनिन्छ। यो सन्तुलन र सन्तुलनको चिन्ह हो जसमा यसले शारीरिक जीवनका सबै पाठहरू सिक्छ: यौन शरीरको अवतारमा यसले सेक्सले सिकाउने सबै पाठहरू सिक्छ। सबै अवतारहरूको माध्यमबाट यसले प्रदर्शनका माध्यमबाट सबै पारिवारिक सम्बन्धको कर्तव्यहरू सिक्छ र अझै पनि सेक्सको शरीरमा अवतार हुनुपर्दछ, अन्य सबै डिग्रीहरू पार गर्नुहोस्। मानव शरीर को केवल शारीरिक शरीरहरु यो डिग्री मा छन्, तर एक जाति को रूप मा मानवता अर्को चिन्ह, वृश्चिक (♏︎), इच्छा, र ट्रान्समिटेशन को डिग्री मा छ। यस चिन्ह मा अहंकार को पूर्ण यौन सम्बन्ध (♎︎) बाट जीवन को उच्च उद्देश्यहरु मा ट्रान्समट गर्न पर्छ। यो संकेत र डिग्री हो जहाँ सबै जुनून र वासनाहरू ट्रान्समिट हुनुपर्दछ, यस अघि आफ्नो विमानबाट भित्री रूपहरू र शक्तिको अनुभव हुन सक्दछ जुन शारीरिक उपस्थिति भित्र र पछाडि खडा हुन्छ।
अर्को डिग्री त्यो हो जुनमा इच्छा-रूपहरू शुद्ध हुन्छन्। यो सोच द्वारा गरिन्छ, (♐︎)। तब जीवनका धारहरू र शक्तिहरू सोच्दछन् र सोचेर निर्देशित हुन्छन्, आकांक्षा मार्फत अन्तिम मानवीय चरणमा, जहाँ मानव अमर हुन्छ। अन्तिम र सातौं चरण भनेको पूर्णता हो, साइन मकर (♑︎) मा, व्यक्तित्व; यसमा सबै वासना, क्रोध, व्यभिचार, ईर्ष्या र असंख्य अवगुणहरू पार गरेर, सबै संवेदनशील विचारहरूको मनलाई शुद्ध र शुद्ध पारेर, र अन्तर्निहित ईश्वरत्व महसुस गरेपछि, नश्वर अमरत्व राख्दछन्, सिद्ध संस्कारको माध्यमबाट। आईसिसको पर्दाका सबै प्रयोगहरू र उद्देश्यहरू त्यसपछि स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ, र अमरले घुमाउरो तल्लो तहहरूमा अझै पनि आफ्नो अज्ञानतामा संघर्ष गरिरहेका सबैलाई सहयोग गर्दछ।
² हेर्नुहोस् शब्द, भोल्यूम। २, न। २, "सेक्स।"